1 Pọl, onye a kpọrọ ịbụ onyeozi+ nke Jizọs Kraịst site n’uche Chineke,+ na Sọstenis+ nwanna anyị,
2 na-edetara ọgbakọ Chineke nke dị na Kọrịnt+ akwụkwọ, nakwa unu ndị e doro nsọ+ n’ime Kraịst Jizọs, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nsọ,+ tinyere ndị niile nọ n’ebe ọ bụla na-akpọku aha+ Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, bụ́ Onyenwe anyị na ha:+
3 Ka obiọma na-erughịrị mmadụ+ na udo+ nke si n’aka Chineke bụ́ Nna anyị nakwa n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịrị unu.+
4 Ana m ekele Chineke maka unu mgbe niile n’ihi obiọma na-erughịrị mmadụ+ nke Chineke, nke e nyere unu n’ime Kraịst Jizọs;+
5 na e mewo ka unu baa ọgaranya+ n’ime Ya n’ihe niile, n’inwe ike zuru ezu ikwu okwu nakwa n’ihe ọmụma zuru ezu,+
6 ọbụna dị ka e meworo ka ịgba àmà banyere Kraịst+ gbanye mgbọrọgwụ n’etiti unu,
7 nke mere na ọ dịghị onyinye+ ọ bụla unu na-enweghị, ebe unu na-echeresi ike maka mkpughe+ nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
8 Chineke ga-emekwa ka unu guzosie ike+ ruo ọgwụgwụ, ka unu wee bụrụ ndị a na-apụghị ibo ebubo+ ọ bụla n’ụbọchị+ Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.+
9 Chineke kwesịrị ntụkwasị obi,+ onye kpọrọ unu ka unu na Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst Onyenwe anyị nwee mmekọrịta.+
10 Ma m na-agba unu ume,+ ụmụnna m, site n’aha+ Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ka unu niile na-ekwu otu ihe,+ ka nkewa gharakwa ịdị n’etiti unu,+ kama ka unu dị n’otu n’ụzọ kwesịrị ekwesị n’otu obi na n’otu echiche.+
11 N’ihi na ndị ụlọ Kloi mere ka m mara+ banyere unu, ụmụnna m, na esemokwu dị n’etiti unu.
12 Ihe m na-ekwu bụ na onye ọ bụla n’ime unu na-asị: “Abụ m nke Pọl,” “Ma abụ m nke Apọlọs,”+ “Ma abụ m nke Sifas,” “Ma abụ m nke Kraịst.”
13 Kraịst wee bụrụ onye e kewara ekewa.+ Ọ̀ bụ Pọl ka a kpọgidere n’osisi n’ihi unu? Ka è mere unu baptizim+ n’aha Pọl?
14 Ana m ekele Chineke na ọ dịghị otu onye n’ime unu m mere baptizim ma e wezụga Krispọs+ na Geyọs,+
15 nke mere na ọ dịghị onye pụrụ ikwu na e mere unu baptizim n’aha m.
16 Ee, emekwara m ezinụlọ Stefanas baptizim.+ Banyere ndị ọzọ, amaghị m ma ọ̀ dị onye ọzọ m mere baptizim.
17 N’ihi na Kraịst zipụrụ m,+ ọ bụghị ịga na-eme baptizim, kama ịga na-ezisa ozi ọma, ọ bụghị n’amamihe nke okwu ọnụ,+ ka e wee ghara ime ka osisi ịta ahụhụ nke Kraịst bụrụ ihe na-abaghị uru.
18 N’ihi na okwu banyere osisi ịta ahụhụ ahụ bụụrụ ndị na-ala n’iyi+ ihe nzuzu,+ ma ọ bụụrụ anyị bụ́ ndị a na-azọpụta+ ike nke Chineke.+
19 N’ihi na e dere, sị: “M ga-eme ka amamihe nke ndị maara ihe laa n’iyi,+ ọgụgụ isi nke ndị nwere ọgụgụ isi+ ka m ga-ajụkwa.”+
20 Olee ebe onye amamihe nọ? Olee ebe odeakwụkwọ nọ?+ Olee ebe ọ̀rụ́ ụka+ nke usoro ihe a nọ?+ Ọ̀ bụ na Chineke emeghị ka amamihe nke ụwa bụrụ ihe nzuzu?+
21 N’ihi na ebe ọ bụ na ụwa esighị n’amamihe ya+ mara Chineke,+ Chineke ji amamihe ya hụ na ọ dị mma isi n’ihe a na-ekwusa nke bụ́ ihe nzuzu+ zọpụta ndị kwere ekwe.
22 N’ihi na ndị Juu na-asị ka e nye ha ihe ịrịba ama,+ ndị Grik na-achọkwa amamihe;+
23 ma anyị na-ekwusa Kraịst a kpọgidere n’osisi,+ ọ bụụrụ ndị Juu ihe ịsụ ngọngọ,+ ma bụụrụ ndị mba ọzọ ihe nzuzu;+
24 otú ọ dị, ọ bụụrụ ndị a kpọrọ, ma ndị Juu ma ndị Grik, Kraịst, bụ́ ike+ nke Chineke na amamihe+ nke Chineke.
25 N’ihi na ihe nzuzu nke Chineke maara ihe karịa ụmụ mmadụ, ihe na-adịghị ike nke Chineke dịkwa ike karịa ụmụ mmadụ.+
26 N’ihi na unu na-ahụ òkù ọ kpọrọ unu, ụmụnna m, na ọ bụghị ọtụtụ ndị maara ihe+ n’ụzọ anụ ahụ́ ka a kpọrọ,+ ọ bụghị ọtụtụ ndị dị ike,+ ọ bụghị ọtụtụ ndị si n’ezinụlọ eze ka a kpọrọ;
27 kama Chineke họọrọ ihe nzuzu nke ụwa,+ ka o wee menye ndị amamihe ihere; Chineke họkwaara ihe ndị na-adịghị ike nke ụwa, ka o wee menye ihe ndị dị ike ihere;+
28 Chineke họkwaara ihe ndị dị ala nke ụwa na ihe ndị a na-elelị, bụ́ ihe ndị na-adịghị adị,+ ka o wee mee ka ihe ndị dị adị ghara ịdị irè,+
29 ka anụ ahụ́ ọ bụla wee ghara ịnya isi+ n’ihu Chineke.
30 Ma ọ bụ n’ihi ya ka unu na Kraịst Jizọs ji dị n’otu, bụ́ onye ghọọrọ anyị amamihe+ nke si n’aka Chineke, ghọọkwara anyị ezi omume+ na ịdị nsọ+ na ntọhapụ site n’ihe mgbapụta;+
31 ka o wee dị nnọọ ka e dere, sị: “Onye na-anya isi, ya jiri Jehova nyaa isi.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D46%26Chapter%3D1%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl